FaithWriters.com-Christian People - I call you now challenge
I call you now challenge
�I say Jesus Christ is who he is, I know him clearly and I deal with him personally be face to face.� You must be like that.
Not useful for you and me with only History, Bible, Koran, Three Pitaka,-Tree Group of Dhamma (Buddhist�s Teaching) and many words from elders. Personally experience is right, correct and Truth.
သင်ဟာ လောကမှာရှိတဲ့ ဘာသာတရားအားလုံးရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေ၊ တရားတွေကို အားလုံးသိ၊ အားလုံးတက်၊ တရားအားလုံးကို အာဂုံဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ ထိုတရား အားလုံးကို ထုံးလိုမွှေရေလိုနှောက်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ လူဘ၀အစမှသည် အဆုံးတိုင်အောင် ထိုတရားဓမ္မအားလုံးကို တစ်ခုမကျန် ကျင့်သုံးနေတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။ နောက်ဆုံး ရဟန္တာဖြစ်ပြီး ၊သူတော်စင်ဖြစ်ပြီး၊ လောကကိုအောင်တဲ့ လောကသားတို့က သတ်မှတ်တဲ့ ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုစေဦးတော့ ၊ ယေရှုခရစ်ကို သင်အနေနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအနေနှင့်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံ စကားပြောဖူးသူ၊ ရင်းနှီးဖူးသူဖြစ်ရမယ်။ ပညာတက်ဖြစ်တယ်။ သင်ယူစရာလေ့လာစရာတွေ ကုန်ပြီလို့ သင့်အနေနှင့်မှတ်ယူဦးတော့ ၊ လူဖြစ်လာပြီး ယေရှုခရစ်ကိုတောင်မှ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မတွေ့လိုက်ရ၊ မသိလိုက်ရ၊ စကားမပြောလိုက်ရ၊ ယေရှုခရစ်ဆိုတဲ့သူဟာ ဘယ်လိုကောင်ပါကွာဆိုတာကို ဂဃနဏ မသိလိုက်ရ၊ တခြားသူတွေကိုတောင် မပြောပြနိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်၊ သင်ဟာ လောက လူသားအားလုံးက ကိုးကွယ်ထိုက်တဲ့ ဘုရားဖြစ်တဲ့သူဆိုစေဦးတော့ သင်ဟာ ယေရှုခရစ်ကို ရှုံးနှိမ့်သူဖြစ်တယ်။
သင်လူဖြစ်လာခြင်းဟာ ယေရှုခရစ်ကို သိဖို့၊ရင်းနှီးဖို့အရေးကြီးတယ်။ ထာဝရဘုရား သခင်ကိုသိတယ်။ အလာရှင်မြတ်ကိုသိတယ်။ ဗုဒ္ဓကိုသိတယ်။ ဖန်ဆင်းရှင်ကိုသိတယ်။ တမန်တော် မိုဟာမက်ကိုသိတယ်။ တမန်တော် မိုးဇက် (မောရှေ)ကိုသိတယ်။ ဒီကမ္ဘာမှာပွင့်ခဲ့ဖူးသော မရေတွက်နိုင်အောင်များသော ဗုဒ္ဓဘုရားတွေကို အကုန်သိတယ်။ စကြစဠာကြီးတစ်ခုလုံးကို အကုန်သိတယ်ဆိုစေဦးတော့ ၊ ယေရှုခရစ်ဆိုတဲ့ကောင်ဟာ ဘယ်လိုကောင်ပါကွာ ၊ ဒီကောင်ဟာ ဒီလိုလူဖြစ်တယ်ကွ ၊ တစ်လောကလုံးနှင့် တစ်ယောက်ဖြစ်စေဦးတော့ ငါအနေနှင့် ယေရှုဟာ ဒီလိုကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ငါ့အသက်နှင့်တောင် အာမခံပြီး ပြောရဲတယ်ကွာ၊ ကျိန်ရဲတယ်ကွာဟု မိမိအသက်နှင့်တောင် အာမခံပြီး လူတိုင်းကို ပြောပြနိုင်တဲ့သူ၊ ပြောရဲနိုင်တဲ့သူ ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။
ကိုယ်တွေ့ကအရေးကြီးတယ်။ သမိုင်းကြောင်းစာတွေ့၊ သမ္မာကျမ်းစာတွေ၊ ကိုရ်ရန်တရား စာတွေ၊ ဗုဒ္ဓတရားဓမ္မစာတွေ(ပိဋကတ်သုံးပုံ)နှင့် တဆင့်စကားအတွေ့အကြုံတွေသည် ဘာမျှမခိုင်လုံသလို၊ အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရော ပုံစံနှင့်ဆို သင်ဟာ လူဖြစ်တယ် ဆိုတာတောင် အရောအနှော လူဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ တရားဓမ္မတွေအားလုံးက အမှန်တွေဆိုတာ မသိခင်ကလည်းအမှန်၊ မတွေ့ခင်ကတည်းက အမှန်ဖြစ်နေတဲ့အရာ၊ ရှိနေတဲ့သဘောတရား အမှန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သင်မသိလည်းအမှန်၊ သင့်မကျင့်လည်းအမှန်ဖြစ်တယ်။
သို့သော် ယေရှုခရစ်ဆိုတာဘယ်လိုကောင်ပါကွာဆိုတာတော့ သင်အတွက်မှန်သလား၊ မမှန်သလား သဲသဲကွဲကွဲသိရမယ်။ သင့်ဘ၀မဆုံးခင် မဖြစ်မနေသိသွားရမည့် သူဖြစ်တယ်။ မတွေ့ချင်ဘူး၊ မသိချင်ဘူးဆိုလျှင်တော့ သင်ဟာ လူသားစင်စစ်မဖြစ်သေးသလို၊ မဖြစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ လူသားစင်စစ်ဖြစ်ဖို့ ယေရှုကိုသိရမယ်။ သင်ဟာရဟန္တာ။ သူတော်စင်ဖြစ်ပြီး ဘုရားဖြစ်သွားတာတောင်မှ ယေရှုကိုမသိဘဲ၊ မတွေ့ဘဲ၊ ယေရှုနှင့် စကားမပြောဘူးဘဲ သေသွားခဲ့ရင်၊ သင်ဟာ လူသားဆိုတာကိုတောင် သင်ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ဘဲ ပြန်ထွက်သွားရတဲ့ လူမပီသတဲ့သူဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကဲ � ယေရှုခရစ်နှင့် တွေ့ဆုံဘို့ စလိုက်ကြရအောင်။
O� Eternal Living God from Heaven,
ဒီနေ့ဟုတ်တယ်။ နောက်နေ့ မနက်ဖြန်ဆိုတာ မစောင့်ဘူး၊ မလိုချင်ဘူး။ သင်ဟာ အမှန်တကယ်၊ ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရား၊ ထာဝရ အသက်ရှင်တဲ့ ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ ငါကို အဖြေပေးပါ။ ငါရှိတဲ့နေရာကို သင်လာခဲပါ။ ဒီနေ့လာပါ။
ဘုရားသခင်ကိုငါတွေ့ချင်တယ်၊ လူသားတွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်ဆိုတဲ့သူကို သိချင်တယ်။ တွေ့ချင်တယ်။ သင်တို့နှင့်ငါ မျက်နှာချင်းဆိုင် တစ်ယောက်ချင်းကို တွေ့ချင်တယ်၊ စကားပြောချင်တယ်။
ဘုရားသခင်ဆိုသူ ၊ ယေရှုခရစ်ဆိုတဲ့ ကယ်တင်ရှင်ဆိုသူ - သင်ကိုယ်တိုင်ပဲ ယနေ့ငါ့ဆီကိုအရောက်လာပြီး သင့်နှုတ်က သက်သေပေးပါ။ ထာဝရဘုရားသခင် သင်ပေးတဲ့ သက်သေကိုပဲ ငါလိုချင်တယ်။
ယေရှုအားဖြင့် ဆုတောင်းပါတယ်။ အာမင်။